I-Saudi Arabia iqinisekisiwe njengeLizwe eliSebenzayo leLizwe le-ITB e-India 2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula » I-Saudi Arabia iqinisekisiwe njengeLizwe eliSebenzayo leLizwe le-ITB e-India 2021
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-ITB yaseIndiya kunye neGunya lezoKhenketho laseSaudi zibhengeza ubuhlakani obubodwa
Umsitho we-ITB wase-India obanjelwe ngomhla we-7 ukuya kowesi-9 ku-Epreli 2021
Igunya lezoKhenketho laseSaudi linoxanduva lokwazisa ngeSaudi, elona khaya laseArabhiya njengendawo ekuyiwa kuyo
IGunya lezoKhenketho laseSaudi liza kubonisa uluhlu lwezinto ezikhoyo ezinikezelwa ngabakhenkethi kunye neendawo eziphambili ekuyiwa kuzo
IGunya lezoKhenketho lase-Saudi Arabia (i-STA) kunye ne-ITB yase-India babhengeze iSaudi njengeLizwe eliSebenzisanayo le-ITB India 2021.
Umsitho we-ITB India Virtual, obanjwa nge-7 ukuya kwi-9 ku-Epreli ngo-2021, ngumboniso wonyaka we-B2B yorhwebo kunye nenkomfa eyenzelwe ngokukodwa ukwakha ibhulorho kwintengiso yohambo lwaseIndiya naseMzantsi Asia.
IGunya lezoKhenketho laseSaudi linoxanduva lokwazisa ngeSaudi, elona khaya laseArabhiya njengendawo ekuyiwa kuyo. Umbutho ujolise ekuphuhliseni ubuhlakani namaqabane orhwebo kurhwebo kwihlabathi liphela, ukwandisa ukufikelela kukhenketho lwaseSaudi kunye nokuqhuba ukuguqulwa kweemarike eziphambili.
"Igunya lezoKhenketho laseSaudi lakha indawo yoluntu jikelele ezinikele ekuqhubeni ulwazi ngeSaudi njengendawo eyodwa yezokhenketho enikezela ngamava okwenyani eArabia kubahloli bezenkcubeko kwihlabathi liphela," utshilo uFahd Hamidaddin, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba se-STA.
"Ubutyebi bendawo ekuyiwa kuyo ngamaziko elifa lemveli, amaziko ayo asezidolophini anamandla kunye nokwamkela iindwendwe kwabantu baseSaudi kwenza ukuba ibe yindawo ekunyanzeliswa kuyo ngabahambi abafuna iindaba ezintsha, ezingalindelekanga ezenza ukuba uhambo lukhunjulwe ngokwenene."